पानि बेच्दा बेच्दै एक युवाले गरे गाडी भित्र यस्तो बबाल , आखिर किन यस्तो भयो त ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
पानि बेच्दा बेच्दै एक युवाले गरे गाडी भित्र यस्तो बबाल , आखिर किन यस्तो भयो त ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki September 15, 2019
मोरंग । मोरंगको पथरीमा सडकमा पानि बेच्ने एक युवा बिबेक परियार जो पानि मात्र बेच्ने हैन गाडीमा सवार गर्ने यात्रुहरुलाई पानि बेच्दै मनोरंजन समेत दिने गर्छन । २२ बर्षिय बिबेक परियार सामान्य परिवारका हुन् । उनि दिनभरि सडकमा गाडी भित्र गएर पानि बेच्ने काम गर्छन भने जाडो समयमा ट्याक्टर चलाउने काम गर्छन ।